Hlola i-Textile Tours Odisha | Ukufuna ngakumbi Ukuya kwi: + 91-993.702.7574
Iindwendwe zeeTekisi zoLuntu
Ngaba ungumntu ovuyayo ngokubona izinto eziyinkimbinkimbi okanye igama leTechtile libonakala lithandeka kuwe? Emva koko ufike kwindawo efanelekileyo. I-Odisha ye-Textile Tours I-Odisha ikunikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokuhlola i-Odisha yelizwe elikhethekileyo letile. I-Indiya yenye yamazwe aphantsi kakhulu ngokwexabiso lokukhuphisana kwezixhobo. U-Odisha unomlando omude we-textile shishino. Amagama ase-Odisha baye bafumana udumo lwehlabathi kunye nedumela lokuyila kunye nobungakanani. Izixhobo ezahlukeneyo zikhona kwi-Odisha ezifana neSambalpuri, iBomkei neBerghampuri. I-Odisha iphinda idume ngokuhlobo lwayo lwe-Ikat lokuluka. Unokuzibandakanya kwezi zinto uncedo ngoncedo lweetekisi zokutyelela i-Odisha. Iingubo zezakhiwo zenkcubeko ezibonakalisa iimbali zoluntu zendawo apho zivela khona. Izindwangu zaseIndiya ziyahluka ukusuka endaweni ukuya kwindawo ephawulekayo, kungekhona nje ngohlobo lwezinto okanye iingubo kodwa kunye nokuyila, ukubonakalisa kubo ukuhlukahluka kwimizekelo yenkcubeko kunye neentlanga. Iindwendwe zeeTytile zeTytile zeTytile Ziya kuqinisekisa ukuba unamava afanelekileyo eempahla kunye neengubo zengubo.
Iipokethiji zethu ze-Odisha ze-Textile Tours zilungele ukuba abantu abanezambatho kunye neengubo banomdla kwaye bafuna ukuphonononga imboni ye-textile ye-Odisha. Inkqubo yohambo lwe-14 ngosuku kunye ne-Bhubaneswar, iNuapatna, neManabandha edume ngokuba yi-Olasingh Textile Village, i-Chikiti Textile Village, i-Sambalpuri Textile Village kufuphi neSagarpalli kunye ne-Buttupalli, i-Barapalli Textile Village, i-Attabira Textile Village, i-Sericulture Projects kunye neTussar Silk Village. Awufanele ulinde ukufumana eli lihle le-Odisha Textile Travel. Phakisha iifoksi zakho ngokukhawuleza, uze ushiye into ephumayo.
Ixabiso: 51198 | Ikhowudi yoKhenketho: 009
Ukudibanisa kunye nokubulisa xa ufika kwi-Bhubaneswar Airport / iSitishi seSitishi uze uhanjiswe kwihotele engaphambili. Ukuba ixesha livumelekile, ukutyelela kweetempileni ezindala ze-07th Century AD ukuya kwi-12th Century AD. Ngobusuku EBhubaneswar.
USUKU 02: UBHUBANESWAR - UDHENKANAL
Emva kwesidlo sasekuseni ukuya kwi-Dhenkanal ukutyelela e-Nuapatna (i-IKAT yokuLondoloza ilali) neSadeibarini (iDhokra Casting Village). Ngobusuku kuDhenkanal.
USUKU 03: UDHENKANAL - SAMBALPUR
Emva kwesidlo sasekuseni ukuya eSambalpur. Ngobusuku eSambalpur.
USUKU 04: SAMBALPUR - BARGARH - BARPALI - BALANGIR
Emva kokutya kwasekuseni kuBalangir ngeBargarh Ukuhlalisa iziLuntu kunye neBalli Silk zokuLungisa iiNdawo (abahlali baseBarpali bangabalingisi beTussar Silk). Ngobusuku eBalangir.
USUKU 05: UBALANGIR - SONEPUR - BALANGIR
Emva kwesidlo sasekuseni tyelela kwiSonepur Weaving Village. Ngobusuku eBalangir.
ISUKU 06: IBALANGIR - IGOPALPUR (GANJAM)
Emva kwesidlo sasekuseni ukuya eGopalpur ngePadmanavpur Weaving Village. Ngobusuku kuGopalpur.
Emva kokuhamba kwexesha lesidlo sakusasa ukuya kwisikhululo seSitimela seSitimela seBerpur / iBhubaneswar ukuya phambili.